Fanarenana ny firenena : "Mila asa mivaingana" -
AccueilRaharaham-pirenenaFanarenana ny firenena : « Mila asa mivaingana »
Fanarenana ny firenena : « Mila asa mivaingana »
12/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vao telo taona monja dia efa hita ny fiovana eto amintsika, raha tsy hilaza fotsiny afa-tsy ny ny toe-karem-pirenena, izay efa mitraka tokoa amin’izao fotoana izao. Anisan’ny fanamby efa napetraky ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fanarenana haingana ny fahantrana. Tsy vitan’ny eboebo politika fotsiny izany, toa ny fanaon’ny sasany izay tia ho eo amin’ny fitondrana. Ny Filoham-pirenena rahateo izay tsy nisalasala nanala ireo eo amin’ny fitondrana izay hita fa tsy nahavita ny asany. Nambaran’ny minisitra misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana no sady filoha nasionalin’ny HVM, Rivo Rakotovao fa 57 taona lasa izao dia kabary tsy arahin’asa no niseho teto amin’ny firenena. Izany hoe, tsy hita marina izay tena narary ny vahoaka Malagasy, toa ireo tantsaha izay misedra olana marobe, kanefa ny 80% an’ny Malagasy dia tantsaha avokoa. Raha toa ka izy ireo anefa no latsaka ao anatin’ny fahoriana dia mijanona ao anatin’ny fahantrana foana Madagasikara. “Ahafahana miara-mandroso dia tsy ny tombontsoan’ny olom-bitsy, na ny mpanao politika fotsiny no jerena fa ny olana mianjady amin’ny vahoaka tsy ankanavaka. Tsy vao androany akory ny fitondram-panjakana nifandimby no nanao izany teny izany, fa mampiseho kosa ny fitondrana ankehitriny fa ezahina ho firenena mandroso sy manana ny maha-izy azy i Madagasikara.”, raha araka ny fanazavana nentiny hatrany. Midika izany fa mila olona miray hina ka mandray andraikitra ity firenena ity, ary tsy vitan’ny fitondram-panjakana irery akory ny fanarenana ifotony fa tsy maintsy iantsorohan’ny rehetra.
Ankoatra izay, dia fantatra tokoa fa anisan’ny nampitaraina ny olona maro ny fiovaovan’ny toetr’andro izay nisesisesy tato ho ato. Rehefa zohiana anefa ny zava-misy dia noho ny fahasimban’ny tontolo iainana no nahatonga izany. Tompon’andraikitra amin’izany ny tsirairay, ary toa ny mandrora mitsilany ihany ka mahavoa tena … Mbola afaka harenina anefa izany, ary tsy mila vola ny fikajiana ny tontolo iainana, fa ny voka-dratsiny kosa no mitaky volabe avy eo, raha araka ny fanazavana nentin’ny lehiben’ny faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary. Toa ny any amin’ny distrikan’Ankazobe izay nambarany hatrany fa anisan’ireo toerana mamokatra betsaka indrindra, fa noho ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny tsy fahampian’ny enti-manana no tsy ahafahana mamokatra araka ny tokony ho izy.
Aoa satria fotoana fiatombohan’ny taom-pamokarana 2017-2018 izao, dia nahazo fanampiana ireo tantsaha ao amin’ny distrikan’Ankazobe. Nisy araka izany ny fanolorana masomboly voafantina 4 taonina omaly maraina, nandritra ny fitsidihan’ny ekipan’ny minisitera ny toerana. Notsinjaraina ho an’ireo kaominina fito manerana ny distrika izany, dia ny any Miantso, Kingara, Anroronazo, Tsaramasoandro, Marondry, Ambohitromby ary Ankazobe. Saika ny distrika rehetra moa dia efa nahazo fanampiana avy amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana avokoa.
Nandritra ny fitsidihana nataon’ny ekipan’ny minisitera dia nanararaotra naneho ny hetahetany ihany koa ireo mponina any an-toerana. Ao ny fangatahana fanamboarana ny tetezana, efa 3 taona tokoa mantsy izay no tsy nisy fanamboarana nefa eo no fifamoivoizan’ireo fiara izay mivoaka sy miditra. Ankoatra izay, tsikaritra ihany koa nandritra ny fidinana ifotony fa maro an’isa ireo mpivarotra izay manao ny asa fivarotany eny an-tsisin-dalana, noho ny tsy fananana fotodrafitrasa. Araka izany dia nangataka ny hananganana tranobe natokana ho an’ny fivarotana ireo mpivarotra, ka hanara-penitra izany sehatra izany. Manano sarotra azy ireo tokoa mantsy ny mivarotra sakafo manta eran’ny lalana raha tsy hiresaka fotsiny afa-tsy ny fibahanan-dalana. Ny vokatra rahateo izay mitobaka tokoa, ary efa mandray anjara amin’ny fanondranana any ivelany ihany koa ny any Ankazobe amin’izao fotoana izao. Farany, dia nilaza ihany koa ny solontenan’ireo tantsaha fa tsy ampy teknisianina izy ireo eo amin’ny asany, ahafahana mamokatra mihoatra ny efa nahazatra. Ny tanjona imasoana mantsy dia ny hitomboan’ny taham-pamokarana ho 30%. Araka izany dia nandroso soso-kevitra ny Minisitra Rivo Rakotovao, ny amin’ny fanomezana fiofanana ireo olona izay efa manana traikefa eo amin’izany sehatra izany, ka ho singanina ao anatin’ny kaominina tsirairay izany.
Fifidianana filoham-pirenena : Amin’ny faha-7 novambra
Raha samy nametra-panontaniana ny besinimaro mahakasika ny datim-pifidianana taorian’ny fanomezan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ny volavolana tetiandron’ny lehiben’ny governemanta, dia omaly maraina no namoahan’ny praiminisitra Ntsay Christian ireo daty ofisialy. ...Tohiny
Fiaraha-miasa : Firenena vahiny 10 hampiasa vola eto Madagasikara
Tanjombato : Faty roa…
Antananarivo Renivohitra : Tsy mahomby ny “coup de poing”